DOWNLOAD SKYPE ỌHỤRỤ MBIPUTE MAKA WINDOWS 7 - MMEMME NYOCHA - 2019
N'ezie, ị maara ihe Skype bụ ma jiri ya ọtụtụ ugboro. Skype bụ usoro nkata olu kachasị mma na Intanet. Ngwa a na-akwado ma ndị PC ma ngwaọrụ mkpanaka.
A na-ahụ Skype site na mfe interface n'etiti ndị ahịa ndị ọzọ maka nkwurịta okwu olu. Ọ dịghị mkpa ijikọ na ọ bụla sava, tinye okwuntughe - naanị ịmepụta akaụntụ, tinye ndị enyi na kọntaktị gị ma kpọọ ha. Tụlee ihe omume nke nnukwu usoro a dị iche iche.
Kpọọ ndị enyi gị
Ị nwere ike jikọọ ndị enyi na ezinụlọ gị n'ụzọ dị mfe, n'ebe ọ bụla ha nọ. Nanị tinye ihe a chọrọ ma pịa bọtịnụ oku.
Ngwa ahụ na-enye gị ohere igbanwe olu nke onye na-eme mkparịta ụka na okwu gị. N'otu oge ahụ, enwere ohere iji dozie olu ahụ, nke na-ewepu mberede na-ada ụda.
Kpọkọta ogbako olu
Ị ga-enwe ike ikwu okwu ọ bụghị naanị n'otu n'otu, kamakwa iji kpokọta otu ìgwè mmadụ (ogbako) ma duzie mkparịta ụka ahụ n'otu oge na ọtụtụ ndị na-akpọtụrụ.
N'otu oge ahụ, ịnwere ike ịme ka iwu kwadoro maka ịbanye na ogbako ahụ: ị nwere ike ịkwanye ndị enyi gị na mkparịta ụka, ma ọ bụ na ị nwere ike ime nnọkọ ọha na eze - mgbe ahụ i nwere ike ịga na ya site na ntinye aka. I nwekwara ike ikenye ikike ndị ọrụ nke ogbako.
Ngwa ahụ, na mgbakwunye na nkwurịta okwu ọdịyo, akwado nkwurịta okwu ederede. Na nke a, ị nwere ike ịkekọrịta njikọ, ihe oyiyi, wdg. A ga - egosipụta ngwa foto ahụ (obere obere) na nkata.
Skype na-enye gị ohere ikwurịta site na njikọ vidiyo. Nanị jikọọ kamera - na ihe oyiyi ya ga-agbasa na ndị ọrụ ndị ọzọ nke usoro ihe omume ahụ ị na-ekwurịta okwu.
Enwere ike iji usoro a dịka obere ọrụ nchịkọta faili. Nanị ịdọrọ faịlụ ahụ na windo nkata na ọ ga-agafere ndị ọrụ ndị ọzọ.
Nkwado maka ngwa ndị ọzọ
Skype na-enye gị ohere ijikọ plug-ins nke na-eme ka ohere nke nkwurịta okwu gbasaa ma gbasaa ike nke ngwa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iji mmemme dị ka Clownfish ịgbanwe ụda olu gị n'oge.
- obi ụtọ ma doo anya n'ile anya n'ihu;
- ezigbo mma nkwurịta okwu;
- Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ ndị ọzọ;
- a sụgharịrị ngwa ahụ n'asụsụ Russian;
- kesaa n'efu.
- ụfọdụ n'ime ndị ahịa nkata olu nke ọzọ nwere ọnụ ọgụgụ dị mfe nke anaghị achọta na Skype.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji olu na-ekwurịta okwu na ngwa ngwa, mgbe ahụ Skype bụ nhọrọ gị. A gbasiri ike na mgbalị kachasị mma site na nkwurịta okwu.
Download Skype maka n'efu
Ntinye Skype Ịmepụta nkata na Skype Esi tinye Skype Gbanyụọ Skype Autorun na Windows 7
Skype bụ usoro kachasị ewu ewu maka nkwurịta okwu n'efu na Intanet. Enwere ike inwe nkwurịta okwu vidiyo, ozi na faịlụ, nzukọ nke nzukọ dị.
Onye Mmepụta: Skype Limited